Xanuunada muruqyada, khataraha nafsaaniga ah ee bulshada, asbestos, khatarta waddooyinka xirfadlayaasha ah, khatarta dhicitaanka, daalka, kulaylka iyo hirarka kulaylka, radon, shucaaca ionizing (IR) iyo ilaalinta shucaaca (RP) ee shaqaalaha, dhammaan khataraha saameyn kara shaqaalaha oo mararka qaarkood qayb ka ah. ka mid ahaanshaha xirfadda.
Xal ayaa jira si loo yareeyo soo-gaadhista khatarahaas loona ilaaliyo xaaladaha shaqo ee wanaagsan.
Waa maxay khatarta soo-gaadhista?
Soo-gaadhista khatartu waxay khusaysaa dhammaan hawlaha xirfadeed ee ay xaaladaha shaqadu khatar gelinayaan ama wax ka beddelayaan caafimaadka shaqaalaha. Waxay keeni kartaa jirro ama shil.
Loo-shaqeeyaha waxaa ku waajib ah inuu hubiyo badbaadada shaqaalaha iyo inuu ilaaliyo caafimaadkooda jir iyo maskaxeed. Waxa ku waajib ah inuu qaado tallaabooyinka ku habboon, si waafaqsan mabaadi'da guud ee ka hortagga ee uu tiriyay Xeerka Shaqaaluhu. Waxay sidaas ku qiimaysaa khataraha shaqada waxayna fulisaa tallaabooyin ka hortag ah.
yaa quseeya ?
Shaqaale kasta ama sarkaal kasta oo xaaladiisa shaqo iyo dabeecadda hawlihiisa ay khatar ku tahay ammaankiisa iyo caafimaadkiisa ama cid saddexaad.
Dhammaan loo-shaqeeyayaashu way ka walaacsan yihiin, iyadoon loo eegin nooca hawlahooda.
La-gaadhsiinta khataraha 17-Abriil, 2022Tranquillus
READ Chemometrics cutubka 1/2: hababka aan la kormeerin
horeHoos u dhaca caafimaadka, shaqada iyo ka hortagga
socdaBooqashada soo kabashada ka hor iyo booqashada soo kabashada